Top 5 fitaovana fanaraha-maso backlink tsara indrindra 2022 - Victor Mochere
Ny iray amin'ireo singa manan-danja indrindra amin'ny laharan'ny fikarohana dia ny tranonkala sy ny fahefan'ny pejy, izay voafaritra amin'ny habetsahana sy ny kalitaon'ny backlinks. Izy io koa dia iray amin'ireo sehatry ny fanatsarana ny milina fikarohana izay ahafahanao mandresy ny fifaninananao. Misy ihany koa ny SEO ara-teknika sy amin'ny pejy, fikarohana teny fanalahidy, fampivoarana tranonkala, ary fanatsarana votoaty, saingy tsy afaka manatsara be loatra amin'ireo faritra ireo ianao.
Ny backlink dia rohy mankany amin'ny tranokalanao avy amin'ny tranokala hafa. Eo imason'ny milina fikarohana, ny backlinks dia mitovy amin'ny vato ho an'ny tranokalanao. Ny rohy bebe kokoa anananao, ny ambony kokoa ny tranokalanao dia mety ho laharana amin'ny milina fikarohana. Tsy ny backlinks rehetra dia noforonina mitovy, na izany aza. Ny backlinks tsara indrindra dia avy amin'ny tranokala lehibe sy hajaina. Ny backlink avy amin'ny spammy na tranokala mampiahiahy dia mety hanimba ny tranokalanao.
Ny lanitra no fetra amin'ny fananganana rohy. Misy be dia be ny fomba hahazoana backlinks mankany amin'ny tranokalanao, fa ny dingana dia manomboka amin'ny fampiasana backlink checker hanamarina ireo backlink efa misy ho an'ny tranokalanao, ary manana ny mpifaninana aminao. Vokatr'izany dia tsy maintsy manana fidirana amin'ny fitaovana backlink tsara indrindra ianao. Ny mpitsikilo backlink tsara indrindra dia hanampy anao hahita fahafahana hanangana rohy vaovao, hianatra momba ny teknikan'ny mpifaninana aminao, ary hanara-maso ny fahasalaman'ny mombamomba ny backlink anao.
Ireto ny fitaovana 5 tsara indrindra hanaraha-maso ny backlinks amin'ny tranokala rehetra.
Semrush dia iray amin'ireo fitaovana fikarohana teny fototra tsara indrindra eny an-tsena, ary manana fitaovana mahery vaika izy mba hamela anao hamakafaka ny backlinks. Azonao atao ny mampiasa Semrush hijerena ny rohy ananan'ny tranokalanao, izay afaka manampy anao hamantatra ireo olana toy ny rohy ambany kalitao. Raha ny marina, ny Semrush dia manamora izany ho anao amin'ny alàlan'ny famelana anao hahita ny totalin'ny rohy misy pejy mifandray aminao.
Raha manana rohy an-jatony ny pejy, dia mety manondro izany fa tranonkala spammy izy io. Raha ny momba ny backlinks mpifaninana dia azonao atao ny mampiasa Semrush mba hahitana hoe iza amin'ireo tranonkala manana fahefana ambony no mifandray amin'izy ireo, inona ny teny fanalahidy nolaharan'izy ireo, sy ny maro hafa. Izany dia afaka manome anao lisitry ny tranokala hokendrena ho an'ny fananganana backlink anao manokana. Ary betsaka izany ao amin'ny Semrush.
Izy ireo dia ahitana latabatra sy tabilao mihoatra ny am-polony izay mamintina ny mombamomba anao backlink, ao anatin'izany ny backlinks avy amin'ny indostria, firenena, sehatra ambony, toetra, karazana, vatofantsika, ary naoty fahefana, ary koa ny tantaran'ny backlink nandritra ny dimy taona. Semrush dia fitaovana tena tsara amin'ny famoronana haingana tatitra manintona sy hahazoana fomba fijery mason'ny vorona momba ny ezaka fananganana rohy anao na ny mpifaninana aminao.
Ahrefs backlink checker dia hanome anao topimaso momba ny sehatra nofidinao, ary azonao atao ny manadihady mba hijery ny antsipirian'ny backlinks. Ahrefs koa dia manamora ny fahitana ireo rohy miverina izay very. Ireo dia rohy nanananao taloha izay nanjavona ankehitriny. Angamba nofafan'ny tompon'ny tranonkala ohatra ny pejy mifandray aminao. Azonao atao ihany koa ny mamantatra ny backlinks izay tapaka. Ireo dia rohy manondro ny tranokalanao, fa mampiasa URL tapaka izay mipetaka amin'ny pejinao 404. Mety mila mifandray amin'ny tompon'ny tranokala ianao hanamboatra azy ireo.
Azonao atao koa ny mampiasa Ahrefs handinihana rohy anatiny ao amin'ny tranokalanao. Azonao atao ny manivana azy ireo mba hijerena ireo rohy anatiny tsy narahinao tsy nahy, mba hahafahanao manamboatra azy ireo. Ny metrika fanampiny mifandraika amin'ny backlinks dia ahitana ny domains sy ny fahefan'ny pejy, ny fifamoivoizana ary ny lahatsoratra sy ny karazana vatofantsika. Ny fijerena fohy momba ny mombamomba ny backlink amin'ny ankapobeny dia omena ihany koa, ao anatin'izany ny naoty domain, ny fitambaran'ny backlinks, ary ny isan'ny tranonkala manondro.
Moz Link Explorer afaka manome anao ny mombamomba ny rohy amin'ny tranokalanao, izay azonao ampitahaina amin'ny mombamomba ny mpifaninana aminao. Izany dia mamela anao hamantatra hoe inona no mety ho zavatra hafa ataon'izy ireo aminao. Izy io koa dia manana fitaovana mora ampiasaina antsoina hoe Link Intersect, izay ahitanao hoe iza amin'ireo tranonkala mifandray amin'ny mpifaninana aminao fa tsy aminao. Ireo tranonkala ireo dia tena tsara hokendrena amin'ny fananganana rohy. Moz koa dia mamela anao hahita ny backlinks very. Izany dia manome anao fahafahana hanandrana hanova ireo rohy ireo.
BuzzSumo dia natao hamela anao hamakafaka ny atiny sy ny votoatin'ny mpifaninana aminao. Fomba tsara ahafahana mamorona hevitra lohahevitra, fa azonao ampiasaina koa izany mba hanampiana anao amin'ny paikadin'ny backlink anao. Azonao atao ny manoratra teny fototra na anaran-tsehatra fotsiny mba hahitana ny atiny malaza indrindra amin'io teny io, na ny atiny malaza indrindra amin'io sehatra io. Azonao atao ny manindry ny kisary rohy eo akaikin'ny vokatra rehetra hahitana ny backlinks ho an'io votoaty io.
Azonao atao mihitsy aza ny manoratra ny URL amin'ny votoaty manokana ary mijery ny backlinks manondro an'izany. Mety ho fomba tsara hijerena hoe iza amin'ireo vohikala mifandray amin'ny lahatsoratra ambony indrindra an'ny mpifaninana aminao izany. Ny fitaovan'izy ireo Backlinks mahitsy dia ahafahanao mahita ireo pejy mifandray amin'ny URL na sehatra manokana. Ity dia fomba mora hijerena ny backlink an'ny mpifaninana aminao indray mandeha. Azonao atao ny manivana mora foana ny backlinks mba hijerena ireo avy amin'ny vanim-potoana samihafa teo anelanelan'ny 24 ora lasa sy ny 5 taona lasa.
OpenLinkProfiler dia fitaovana maimaim-poana izay ahafahanao mandinika ny backlinks amin'ny sehatra rehetra. Misy safidy maro samihafa amin'ny fanivanana backlinks, ary azonao atao mihitsy aza ny mijery ny fotoana nahazoan'ny rohy iray. Noho ny maha-maimaim-poana azy, dia manolotra safidy marobe sy angon-drakitra betsaka. Tsy hifanaraka amin'ny endri-javatra rehetra sy ny herin'ny fitaovana misy karama izy io, fa mendrika ny hampiasaina raha tsy mahavidy fitaovana karama ianao.
backlinks dia singa manan-danja amin'ny laharana ambony amin'ny SERPs. Rehefa manatsara ny SEO an'ny tranokalanao dia tadidio foana ny fomba ahafahan'ny fampidirana backlinks ivelany ho lasa lavitra. Fanampin'izay, tadiavo foana ny fahafahana manangana rohy hampitomboana ny 'vato' ny tranokalanao. Ny fandefasana vahiny, ny votoaty azo zaraina toy ny infografika, ary ny fananganana rohy tapaka dia fomba tsara hampitomboana ny mombamomba anao backlinking. Amin'ny fampiasana fitaovana backlink checker (famakafakana rohy), azonao atao ny manao audit backlink ary manao tetikady fandalinana backlink lalina. Azonao atao ny manampy backlink matanjaka kokoa amin'ny tranokalanao ary manala ireo rohy tsy voamarina izay mety hanimba ny fahombiazan'ny tranokalanao.